[Saturday, April 14th, 18] :: Imaaraadka oo saraakiisha ka joogtay Boosaasoo la baxay
Boosaaso (RH) Magaalada Boosaaso waxaa maanta ka ambabaxay saraakiishii tababbarayaasha Imaaraadka ee ku sugnaa saldhigga ciidamada badda Puntland ee Boosaaso, iyagoo u duulay magaalada Dubai, sidaas waxaa laga soo xigtay ilo ku sugan magaalada dekadda leh ee Boosaaso.
Garoonka diyaaradaha Boosaaso ayaa muddo lagu xannibay saraakiisha Imaaraadka ee u socday Dubai, kaddib markii ciidamada ammaanka Puntlad ay ku amreen in la baaro boorsooyin ay wateen.
Lama oga sababta saraakiishii Imaaraadka ee ku sugnaa Boosaaso u baxeen mana jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland iyo hey’addaha ammaanka oo ku aadan ka bixitaankooda.
Diyaarad gaar ah ayaa lagu qaaday saraakiisha, balse warar madax bannaan ayaa sheegaya in arrintan ay ka dambeesay xiriirka sii xumaanaya ee Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Dad badan ayaa aaminsan mustaqbalka Imaaraadka tababarka uu siinayey ciidamada Puntland in ay soo dhammaatay maadama muddo kumeel gaar ah la hakiyey.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay la wareegeyso ciidamadii Imaaraadka uu tababbarayey isla markaana ay bixineyso mushaarkii la siinayey.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa gaaray meeshii ugu xumayd toddobaadkan kaddib markii garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu qabtay 9.6 milyan oo dollar oo lagu sidday diyaarad ay lee dahay Imaaraadka.
Dowladda Soomaaliya ayaa horrey dhexaad ka istaagtay khilaafkii soo kala dhexgalay waddamada Khaliijka oo xiriirka u jaray dowladda Qadar.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya QM ayaa dhawaan golaha ammaanka QM u gudbiyey ashtago ku aadan fargalinta Imaaraadka uu ku hayo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan saldhigga millitari ay ka dhisanayaan magaalada Berbera.
posted on Saturday, April 14th, 18